Ingxoxo ye-Intanethi - Umculo wamahhala kunye nokukhutshwa kweendaba kwiividiyo zakho ze-YouTube okanye iiprojekthi ze-multimedia
Ngokuxoxa ngolu hlelo lokusebenza lwe-chat, uthatha inxaxheba ekuphuhlisweni kwengqiqo yolwazi ukuba ube yingxenye. Yingafi!
Intelligence Intelligence (Intelligence Intelligence, AI) isayensi yekhompyutheni ejolise ekudalweni kwamashishini abonisa iimpawu zendlela yokuziphatha. Incazelo "yokuziphatha okuyingqiqo" isengxubusho yengxoxo, eyona nto isetyenziswa ngokuqhelekileyo njengesiqhelo sesicatshulwa ngesizathu somntu. UJohn McCarthy weza ku1955 okokuqala.
Uphando lweengcinga zobuchule lusetyenziswa ngokukhethekileyo kwaye lukhethekileyo kwaye lukwahlula kwiindawo ezininzi ezingenakudityaniswa. Uphando lonke lukwahlukana kwiingxaki ezininzi zobuchwepheshe; Ezinye zeengingqi zijongana nesisombululo seengxaki ezithile, ezinye zazo, ngokomzekelo, ukusebenzisa izixhobo ezithile okanye ukufezekisa izicelo ezithile. Umbuzo wokuba kunokwenzeka yini ukwakhiwa kwengqiqo yolwazi kuhambelana ngokusondeleyo kwingxaki yokuqonda, umbuzo wokubala owenziwe ngqondweni wengqondo ngokwawo okanye umbuzo wokuziphendukela kwemvelo. Iifilosofi ezifanayo zengqondo zengqondo zifana neengxaki ezifanayo.
Imiba ephambili kuphando ziquka nokuqiqa ngumntu nobukrelekrele, ulwazi, ucwangciso, ukufunda, ukwenza kweelwimi zemveli (unxibelelwano), imbono kunye nako ukuqhubela nokusebenzisa izinto. Ukuphumeza intelligence jikelele isekhona enye yeenjongo eziphambili kuphando kweli candelo.
uthungelwano zobuchopho Artificial kubuntlola elifakelweyo indlela yokuziphatha engqinelanayo kwezinto eziphilayo. Ziqulethe imifuziselo azo zemithambo-luvo ukuba adlulisele imiqondiso omnye komnye kunye nokutshintsha usebenzisa i transfer function kwenye "iiseli zemithambo-luvo".
kwezakhi zofuzo na uthetha ngokungqongqo ukuba indlela zokusombulula iingxaki ubukrelekrele ngumntu, kodwa indlela jikelele nkqubo, nto leyo endaweni ukubhala algorithm ethile ukuxazulula lo msebenzi ngokujonga iindlela yokuzivelela.
Inkqubo ingcali yinkqubo yekhompyutha ukuba unalo umsebenzi ngokubonelela ngengcebiso ingcali, isigqibo okanye iingcebiso iinkqubo izisombululo ezithile situaci.Expertní zilungiselelwe ukuze bakwazi ukusebenzisa inkcazelo non-yamanani kunye ezingacacanga ukuze kulungiswe imisebenzi ayikwazi ukuba kusonjululwe iinkqubo emveli algorithmic.
Ukufunda komatshini yindawo engaphantsi kweengcinga zobuchule, ukujongana nezilungiso kunye nobuchule obwenza ukuba inkqubo yekhompyutha ifunde '. Ngokufunda kwisimo esinikeziweyo, sithetha utshintsho olunjalo kwimeko yangaphakathi yenkqubo njengendlela yokulungelelanisa ngakumbi kwiinguqu kwiimeko.